Magacyada Laba Qof Oo la tuhmayo in ay ka dambeeyeen Weerarkii Centaral Hotel oo lasoo bandhigay Aqri Magacyadooda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Magacyada Laba Qof Oo la tuhmayo in ay ka dambeeyeen Weerarkii Centaral Hotel oo lasoo bandhigay Aqri Magacyadooda
Weerar u Muuqday mid la qorsheeyay in mudo ahna laga soo shaqeeyay ayaa shalay lala beegsaday Hotelka Central ee Magaalada Muqdisho, hotelkan ayaana kamid ahaa Hoteelada sida weyn amaankooda loo ilaalin jiray waana mida keentay in ay deegaansadaan masuuliyiin sar sare oo katirsan Dowlada Soomaaliya.
Wakaalada Wararka AFP oo soo xiganeysa ilo katirsan Sirdoonka Dowlada Soomaaliya ayaa qortay in weerarkii qasaaraha badnaa ee shalay lagu qaaday Hotelka Centarl ay ka dambeeyeen labo qof oo Soomaali ah kuwaa oo heesta dhalashada Dalka Holand.
Sirdoonka Dowlada Soomaaliya ayaa aaminsan in weerarkii shalay ka dhacay Hotelka Central Hotel in ay ka dambeeyeen nin iyo haweeney heesta dhalashada Dalka Holand sida ay qortay Wakaalada Wararka AFP.
Ilo katirsan Sirdoonka Soomaaliya ayaa Wakaalada Wararka AFP u sheegay magacyada ninka iyo haweeneyda fuliyay weerrakii shalay ka dhacay Hotelka Central , waxaana magacyada dadka la tuhmayo In ay fuliyeen weerarkaasi ay kala yihiin Ismail Muse,iyo Lula Ahmed Dahir.
Gabdhan la tuhmayo in ay wax ka fulisay weerarkii ka dhacay Hotelka Central ayaa la sheegay in ay ka shaqeeneysay,gabadha ayaana la sheegay in Hotelka ay ka shaqeeneysay qiyaastii afar bilood, waxa ayna ka mid aheed dadka qaabilsan soo dhaweynta macaamiisha Hotelka.
Weerarkii shalay lagu qaaday Hotelka Central waxaa ku dhintay dad ka badan 25-qof waxaana dadka dhintay ku jira Xildhibaano iyo Masuuliyiin kale oo katirsan Dowlada Soomaaliya, waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay R/Wasaare kuxigeenka Soomaaliya iyo labo kamid ah Golaha Wasiirada cusub.